I-Sicario 3 Kusamele Imenyezelwe Ngokusemthethweni! Kuzokwenzekani Ngokulandelayo? - Ukuzijabulisa
I-Sicario 3 Kusamele Imenyezelwe Ngokusemthethweni! Kuzokwenzekani Ngokulandelayo?
Isiqephu seSicario 3
Umlingisi we-Sicario 3
Usuku Lokukhishwa Lwe-Sicario 3 Selumisiwe.
I-trailer ye-Sicario 3
Umqondisi ungomunye wabantu ababamba iqhaza elibalulekile ekukhiqizweni kwefilimu. U-Denis Villeneuve ungumqondisi owaziwayo ongakwazi ukuqondisa nokudala.
Usiqondise amafilimu amaningi amahle, futhi kule ndatshana, sizoxoxa ngomunye wabadlali bakhe abadlala kahle kakhulu, uSicario. Le filimu ikhishwe ngo-2015 ukuhlola umcabango womuntu kanye no-Sicario Succeed, futhi singaqagela lokho ngokusekelwe ekubukeni kwakho kulesi sihloko.
Le filimu isivele iveze ama-sequel amabili abantu, futhi abalandeli sebevele belindele isitolimende sesithathu; Kungani kungenjalo? Uma ungumuntu othanda ukuqondisa kuka-Sicario no-Denis Villeneuve, namathela kuze kube sekugcineni kwalesi sihloko.
Sizophinde sixoxe ngokungenzeka kwesahluko sesithathu se-Sicario kanye nosuku lwaso lokukhululwa.
Njengoba imibono kaKate ihlukaniswa ukwesaba okwesabekayo kweqiniso, i-storey ifana nempi yase-US yokushushumbiswa kwabantu emngceleni waseMexico. Uzama ukulandela iziqondiso endaweni engenamthetho, kodwa ngokushesha uyabona ukuthi ukuqina nenzondo akunandawo endle ngokuziphatha. I-CIA ifuna ukucekela phansi ukuhweba kwezidakamizwa kukaManuel Diaz futhi ibambe isizinda sezidakamizwa somphathi wakhe u-Alarcón.
Bahlose ukwenza kanjalo ukuze balungise ikhona lenqola eyodwa, banikeze i-US amandla engeziwe. Nokho, amasu abo angekho emthethweni noma asemthethweni.
UMatt ufundisa uKate ukuthi alwe kanjani ezimpini ezinkulu zezepolitiki nezingezona ezomphakathi. U-Alejandro unebhizinisi elingakaqedwa no-Alarcón. Igqubu eliyimfihlo lika-Hia limenza abulale, enze ubugebengu, futhi ahlukumeze abantu ukuze enze itulo lakhe e-Alarcón.
Njengoba ekuqonda ukubandakanyeka kwakhe enkingeni yezepolitiki ekhulayo, uhla lwesimilo lukaMacer luphukile. Ifilimu inomklamo ongangeni emanzini, indaba eqinile futhi engacacile, nomculo womlando omuhle kakhulu. Ukumataniswa kuka-Blunt no-del Toro kuzuze okukhulunywe ngakho okukhethekile, njengoba u-Villeneuve ekhuphule intokozo yesenzo somenzeli womshoshaphansi okuthiwa ujwayelekile waba kokuthile okubaluleke kakhulu.
Ukuphela kwe-'Soldado' kushiya indawo enkulu yefilimu yesithathu. Naphezu kweqiniso lokuthi wonke angamafilimu azimele, 'i-Soldado' iphetha ngokumangala okumangazayo kangangokuthi olandelayo kufanele azame ukuyibopha.
Ngemva konyaka wokuchitheka kwegazi, sibona u-Alejandro ebhekana noMiguel ekupheleni kwe‘Soldado.’ Utshela uMiguel kaningi ukuthi kufanele abe iSoldado.
Ngenxa yalokho, ifilimu yesithathu ingase ibe sebuhlotsheni buka-Alejandro noMiguel, njengoba ukuqhathanisa komfundi oyinhloko kuzoba ukulandisa okunethemba.
Ngenxa yalokho, ukuza kukaKate Macer, intandokazi yabalandeli, kuyithuba elijabulisayo. 'USicario' wenze umsebenzi omuhle wokuqinisekisa ubuntu bukaKate, futhi naphezu kokungabikho kwakhe okwesibili, singalindela ukuthi abuye. Kuzojabulisa ukubona ukuthi ushintsha kanjani kulandela izehlakalo zefilimu edlule. Kuzoba mnandi ukubona ukuthi indlela yabo yokuphila imthinta kanjani nokuthi imimoya yasendulo ivuka kanjani.
FUNDA KABANZI : I-Bleach Isizini 17 Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi Ngayo!
Imiphumela yefilimu yokugcina ku-Matt Graver ungubani kanye nokuqhathanisa kwakhe no-Alejandro nakho okunye abalobi abangase bahlole.
USteve Forsing udlalwa nguJeffrey Donovan.
UMatt Graver uzodlalwa nguJosh Brolin.
UDave Jennings unguVictor Garber.
I-Ted izodlalwa nguJon Bernthal.
UReggie Waynev uzodlalwa nguDaniel Kaluuya.
URafael uzodlalwa nguRaoul Trujillo.
U-Alejandro Gillick udlalwa nguBenicio del Toro.
Okwamanje alukho usuku oluthembekile lokukhishwa kwe-Sicario: Capos. Njengomphumela, kucatshangwa ukuthi izibikezelo ze-Black Label zokukhishwa sekwephuzile kuka-2021/ukuqala kuka-2022 kubambezeleka, ukukhululwa okumangalisayo kwe-Sicario 3 ngasekupheleni kuka-2022 kufanele kwenzeke.
Ihlaziya impendulo ehlanganisiwe ye-Sicario: Day Of The Soldado kanye neqiniso lokuthi ikwazisa okuhle kakhulu ukwenza kodwa ihola kancane. Kungenzeka ukuthi isitudiyo siqeda isahluko esilandelayo.
FUNDA KABANZI : Ihostela Daze Isizini 3 Iyeza ngo-2022? Isiqinisekiso Sosuku Lokukhishwa!
Mhlawumbe uma u-Emily Blunt enobuhlungu obuphansi emuva, isithakazelo sakhe esithombeni esisha sizovuselelwa. Kodwa-ke, okwamanje, izici eziningi ezibalulekile ze-Sicario 3 zihlala zingaqinisekile.
Okwamanje ayikho i-trailer ye-Sicario 3. Uma sithola i-trailer, sizokwazisa.
Yilokho konke odinga ukukwazi ngeSicario 3. Ngithemba ukuthi usijabulele lesi sihloko. Sicela usazise uma unemibuzo esigabeni sokuphawula esingezansi. Hlala ubukele ukuze uthole izibuyekezo nolwazi olungeziwe!
Sazi Ngalo Mbuso We-Bling Wombukiso Ojabulisayo